NgoLwesine, Agasti 5, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UNick Carter
Njengomnini weshishini, andinakuxelela ukuba ndifumana kangaphi ithuba lokufumana imali eyongezelelweyo okanye ezimbini kwingeniso yokudibana. Ukuba ndiza kusebenzisa nje i-clout yam ukukhupha iimpahla zabo, baya kundibhatala imali. Kwaye, ngapha koko, okoko nje umntu endibhatala imali ndiyakhuthazeka ukuyenza… akunjalo? Akulunganga.
Ukuba ulungele isihogo ekwakheni imodeli yokuthengisa esekwe kumdibaniso, zigcinele ixesha kwaye uye apho bahlala khona. Clickbank, Commission Junction, okanye ezifana. Kwaye, andinkqonkqozi loo modeli. Iyasebenza. Inenzuzo. Kwaye kukho abantu abanezakhono kwaye banomdla kolo hlobo lwethuba. Kuyenzeka nje ukuba bangasoloko befana nabanini bamashishini abaphumeleleyo abaneenkampani ezenza inzuzo ezizezabo.
Ngezizathu ezahlukeneyo, zihlala zinento yokwenza nomfanekiso wophawu, ukuthengisa okuhambelana nayo akunakuba yile nto uyifunayo. Ngelixa linokufumana iziphumo, linokuza nodumo. Ukuba awufuni ukubona imveliso yakho ixhonywe kumakhulu eephepha ezahlukeneyo zokucinezela kunye nekopi ende ekhutshiweyo, ikhutshelwe ngaphandle kwimilambo ye-twitter chock egcwele amakhonkco adibeneyo, okanye igaxelwe kwizigidi zabantu - zonke zinegama lakho kuyo - emva koko Cinga ngendlela eyahlukileyo.
Umceli mngeni ke kukufumana njani amashishini “ahloniphekileyo” (kwaye ndilisebenzisa ngokungathandabuzekiyo eli gama, kuba andithethi ukuba abachaphazelekayo badume kakubi) ukumela imveliso yakho kwifashoni yeshishini elilondolozayo? Impendulo: fumana ukuba yintoni ebakhuthazayo.
As Douglas Karr wabonisa kwisithuba samva nje, ndicaphula enye yeevidiyo endizithandayo, imali ayisoloko iyimpendulo. Ngapha koko, kunqabile ukuba kunjalo. Ngapha koko, sesona sipho semali, kwaye akukho nto iyenye, leyo iyandithintela ekuqwalaseleni izibonelelo ezihambelana nazo. Ngapha koko, ihlambalaza ukubaluleka kwam, ukuqonda kwam ukuba ndingubani kunye nento endiyenzayo, ngokucinga ukuba ndinokuphazanyiswa kumashishini am asele echithe ixesha elininzi ndisebenzisa umtsalane olula wemali.
Ke, uyakha njani into endiyibiza ngokuba yi "Channel Sales" -imodeli yokuhambisa engangqalanga enzima ngakumbi (ewe, ngakumbi eziyinkimbinkimbi) kunokubambisana? Ungazi njani ukuba yintoni eya kukhuthaza umnini-shishini onqwenela ukusebenzisana naye? Lula: lishishini labo.
Oosomashishini basebenza nzima bekhulisa iinkampani zabo ngokungapheliyo. Banamaphupha engqondweni - abanye bayimali, abanye abancedi nto, kwaye abanye bayonwabisa nje kwaye banomvuzo. Ukuba ufuna ukucofa kolo thando kwaye ulusebenzisele ukukhula kwakho kwintengiso, kuya kufuneka ungqinelanise ezi zinto zimbini. Chonga ukuba ukujoyina ijelo lakho akunakongeza kuphela iirandi ezimbalwa zekhomishini kumgca wabo osezantsi, kodwa okunene kuya kubanceda baqhube ishishini labo kule nto bayinqwenela kakhulu.
Ungayibona le nqununu iqeshiwe kwiimodeli zentengiso ezinempumelelo namhlanje. Iarhente yentengiso, umzekelo, yimodeli apho abapapashi bafuna ukugcwalisa ukufakwa, kodwa bayaqonda ukuba ukuthanda kwearhente sisisombululo sobuchule. Abapapashi beSavvy bafumana iindlela zokwandisa loo njongo. Umsebenzi wam wokuqala yayikukuthengisa isoftware ye-Autodesk VAR yendawo. Ndixakiwe ukuba kutheni Autodesk ehlawulisa kabini inqanaba eliqhelekileyo leenkonzo, ndide ndiqonde ukuba bafuna ukukhuthaza abathengi ngayo nayiphi na indlela ukubandakanya i-VAR yendawo ngeenkonzo. Nditsho neyam UMboneleli weQabane Inkqubo yakhelwe kwinto endiyifundileyo kwezi zinto zilungileyo, kunye nezinye.
Ukwakha ijelo lokuthengisa akukho lula, kwaye kunqabile kakhulu ukuba kube yinkqubo ekhawulezayo. Ukuba ufuna ngokukhawuleza kwaye kulula, fumana abaxhasi kwicala lakho. Ukuba uninzi engqondweni yakho kunemali, ke yazi ukuba nathi sinjalo.
tags: urhwebo umanyanisoIdideksiUkuzenzekelayo var varukwakha ijelo lokuthengisaukwakha intengiso yejeloukuthengisa umjelonqakrazaikhomishini isiphambuka
Umvuzo ngokuzimela, ubuchule kunye nenjongo
Aug 5, 2010 ngo-8:39 PM
Iposti emnandi, Nick! Kwaye wamkelekile kwibhlog yeTekhnoloji yeNtengiso. Ndikholelwa ukuba impazamo enye enkulu eyenziwa ziinkampani ezininzi kukungenzi imali ngeenethiwekhi ezimnandi zabathengisi kunye nobudlelwane esele benabo. Ukwakha ubudlelwane bokuthengisa obuvuzwa ngabantu othenga kubo kunye nabaxumi osebenza nabo kunokuba nesiqhamo ngakumbi kunokuphosa nje inkqubo yokunxibelelana apho umntu engenalo naluphi na ulusu kumdlalo.
Aug 12, 2010 ngo-12:34 PM
Isithuba esihle! Kwinkampani yethu, i-Channel Services Group (CSG) siye saqesha amawaka amahlakani esiteshi kwiinkampani ezinkulu zeteknoloji. Ukudala kunye nokuphuhlisa itshaneli eyimpumelelo, eyomeleleyo, ezinikeleyo inkampani yethu ifumene ukuqesha "amaqabane afanelekileyo," okwenza impumelelo yeqabane kunye nokugcina inxaxheba kwandisa ukusebenza kweqabane kunye nokuziphatha kwetshaneli.
Ngelixa ugaya, abathengisi kufuneka baqinisekise ukuba bachitha ixesha labo ngobulumko ngokufumana “amaqabane afanelekileyo.” Siye sabona iinkampani ezininzi zithatha isigqibo malunga nenjongo yokongeza amaqabane unyaka, zifumane injongo, kwaye zizifumana emva konyaka zinengeniso encinci evela kumaqabane asanda kufakwa. Abathengisi kufuneka baqinisekise ukuba baqesha amaqabane anenkampani yakho kunye nomdla ongcono kwaye bafuna ukubhalisa kwiinzuzo zexesha elide kunye nenkampani.
Ukongeza, abathengisi kufuneka benze impumelelo yeqabane ngokuqinisekisa isizathu samaqabane akwinkqubo. Oku kubandakanya unxibelelwano oluphezulu kunye namaqabane okuqeqesha, ukubandakanya kunye nokukhokela amahlakani kumaphulo okuya kwimarike, imisitho exhaswa ngabathengisi, amaphulo okwazisa kunye nokukhawulezisa umjikelo wabo wokuthengisa. Kutshanje sibhale i-case study kunye ne-ROI ye-14X njengesiphumo sokwakha inkqubo yesitishi. Ungayifunda apha http://www.csgchannels.com/CaseStudies/case-studies.html.
Okokugqibela, inkampani yethu ifumanise ukuba ukugcinwa kubaluleke kakhulu ekwakhiweni nasekugcineni itshaneli. Oku kubandakanya ukukhulisa ubudlelwane kunye nabo ngelixa belawula impumelelo yabo. Amaqabane kufuneka avuzwe ngeenkuthazo zokwandisa iinjongo zenkampani.
Njengoko ubonisile, ukwakha itshaneli yokuthengisa akukho lula kwaye kunqabile ukuba kube yinkqubo ekhawulezayo, kodwa kunokuba nomvuzo kwaye kube luncedo xa kusenziwa ngokuchanekileyo.
Aug 12, 2010 ngo-3:48 PM
Amanqaku amahle. Amaqabane afanelekileyo akaphumeleli nje kuphela, anentlungu engaphantsi. Andikwazi ukuyichaza, kodwa ndifumene ukuba xa umntu ehambelana kakuhle nemodeli, ababuhlungu kakhulu. Le esiye sazama ukuyikhama kwisingundo esingalunganga iphele yafunxa ixesha elininzi.
Kwakhona, xa sithetha ngeenkqubo eziphezulu… Ndiyixelele ngolu hlobo: kwishishini lam, ndinabathengi abali-17 ekufuneka ndibabonelele. Ayiyonto nje into yokuba ndibe ne-17 abaBoneleli abangamaQabane. Ayikuko ukuba andidingi kukhonza bonke abasebenzisi be-1500, nje ukuba ndikhonza itshaneli, abanye baya kuzikhathalela.